बि. के. (राणा) राना मगर
मगर जातिको विभिन्न थरहरु मध्ये 'आले, थापा र राना'को ऐतिहासिकताबारे एक संक्षिप्त टिप्पणी
['आले', 'थापा' र 'राना वा राणा' मगर जातिले प्राप्त गरेको राजकीय वा सरकारी मान, पद, सम्मान वा मान्यता हो । यी तीनै 'आले', 'थापा' र 'राना वा राणा' थरहरुको विशेष अर्थ र महत्व छ । अनि, भाषिक एवम् ऐतिहासिक आधारमा अब राना मगरहरुले 'राणा' नै लेख्नु राम्रो हुन्छ । जंग बहादुर कुँवरहरु बि. सं १९१० पछि मात्र 'राणा' बनेका हुन् । तर, त्यो भन्दा ३०० वर्ष पहिले नै गोरखामा राना अर्थात् राणा मगरहरु रहेभएका कुरा त इतिहासमा लेखिएकै छ ।]
मगर जातिको राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक इतिहासका सवालहरुबारे अध्ययन गर्ने सिलसिलामा प्राध्यापक केशर जंग बराल मगरको 'पाल्पा , तनहुँ र स्यांग्जाका मगरहरुको संस्कृति' (प्रथम संस्करण - २०४८, दोश्रो मुद्रण - २०६८ श्रवण) मैले बारम्बार पढ्ने गरेको छु। यो किताबमा मगर जातिको विभिन्न थरहरुको राम्रो सूचिकरण अर्थात् 'लिष्टिंग' गरिएको छ । यस ढंगले अन्य कुनै किताबमा सूचिकरण गरिए नगरिएको मलाई जानकारी छैन । प्रश्तुत मगर जातिको विभिन्न थरहरु मध्ये 'आले, थापा र रानाका' बारेमा सो किताबमा अलिकति कुरा छुटेको वा थप्नु पर्ने पाएँ मैले ।
'आले', 'थापा' र 'राना वा राणा' मगर जातिले प्राप्त गरेको राजकीय वा सरकारी मान, पद, सम्मान वा मान्यता हो । यी तीनै 'आले', 'थापा' र 'राना वा राणा' थरहरुको विशेष अर्थ र महत्व छ । अनि, भाषिक एवम् ऐतिहासिक आधारमा अब राना मगरहरुले 'राणा' नै लेख्नु राम्रो हुन्छ । जंग बहादुर कुँवरहरु बि. सं १९१० पछि मात्र 'राणा' बनेका हुन् । तर, त्यो भन्दा ३०० वर्ष पहिले नै गोरखामा राना अर्थात् राणा मगरहरु रहेभएका कुरा त इतिहासमा लेखिएकै छ ।
खासगरिकन 'थापा र राना थरका' मगरहरुका बारेमा मैले चार-पांच वर्ष पहिले पनि यसरी नै संक्षिप्त कुरा लेखेको थिएँ। प्रश्तुत यी ३ थरहरुको बारेमा सो किताबमा अब अर्को संस्करण छपाई गरिंदा निम्न कुराहरु मिलाउनु वा समावेश हुनु वान्छनीय छ ।
१) माथि भनिएको 'पाल्पा, तनहुँ र स्यांग्जाका मगरहरुको संस्कृति'को अध्याय २.३ मगरका थर र उपथरमा "मगर जाति भित्रको एउटा थर 'आले मगर'को बारेमा,"द्रब्य शाहको शासनकालमा गोरखामा थापा मगर बाहेक राणा र आले मगर भएको कुरा वंशावलीमा उल्लेख भएको पाईन्छ ।" भनेर लेखिएको छ (पृष्ठ ३४) । मगर भाषामा 'आले'को के अर्थ लाग्दछ त्यो त मलाई थाहा छैन तर एउटा कुरा के हो भने यो 'आले शव्द' भारोपेली भाषाको शव्द 'अलिया वा आलिया' (Aliya) संग धेरै मिल्दोजुल्दो छ र यसको अर्थ : 'कुनै सरकारी अधिकारी' भन्ने हुन्छ । ( हेर्नुस : Prof. Dinesh Chandra Sirkar को Indian Epigraphical Glossary -१९६६ : पृष्ठ १६) । यसबाट के बुझिन्छ भने मध्यकालमा 'आले मगरहरु' आजभोलिका सरकारी कर्मचारी जस्ता थिए ।
२) सोही किताबमा "यांग्जाकोट छापडाडा, कास्की जिल्लाका श्री पार्सिंग गुरुङको घरमा भएको अप्रकाशित हस्तलिखित वंशावलीमा गड थाम्ने सिपाहीलाई "थापा मगर " भनेर उल्लेख गरेको पाईन्छ ।" (पृष्ठ ३२)
अब यसमा मिलाउनु पर्ने कुरा> यस 'थापा' शव्दको भाषिक हिसाबले विश्लेषण गर्दा कुरा त माथि लेखिए जस्तै लाग्छ । यसलाई अझ यसरी स्पष्ट गर्न पनि सकिन्छ कि यो 'थापा' शव्द भोट-बर्मेली भाषाको शव्द हो । र, यसमा 'था' को तिब्बती भाषामा 'केन्द्र भन्दा पर, छेउमा वा सिमानामा बसेको वा भएको (Not in center but on the edge or border)' भन्ने अर्थ लाग्दछ भने 'पा' भन्नाले 'मान्छे' भन्ने अर्थ लाग्दछ । नेपाल र पूर्वोत्तर भारतमा रहनेबस्ने अर्को अल्पसंख्यक "थामी" ('था' = छेउमा वा सीमानामा बसेको वा भएको' + 'मी' = मान्छे > or people at the border) जातिको कुरो पनि यस्तै हो ।
सिमानामा बस्नेले 'गड' थाम्ने सिपाहीको काम गर्ने नै हो । तर, यसको अर्को अर्थ 'सिमा रक्षक' पनि हुने भएपछि र 'रक्षक' भन्ने वित्तिकै प्रचलित वर्ण व्यवस्था अनुरुप 'क्षत्रीय' हुने नै भैसकेपछि 'थापा क्षत्री'हरुको संख्या नेपालमा निक्कै हुने भै पनि हाल्यो । नेपालको जनसंख्या सम्बन्धी सरकारी प्रतिवेदनमा क्षेत्रीहरु नेपालमा १५. ८० % ले सबभन्दा बढी जनसंख्या भन्ने लेखिएको जाति हो । ब्राह्मण १२. ७४% ले दोश्रो ठूलो र मगर ७. १४ % ले तेश्रो ठूलो हो ।
मगर जातिको जनसंख्या यो भन्दा धेरै हुनुपर्छ भन्ने कारणसमेत खुलाएर फागुन १९, २०५७ अर्थात् शुक्रबार मार्च २, २००१ काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने कान्तिपुर दैनिकको विचार स्तम्भमा - "हामी मगरहरू यो तथ्याङ्कलाई स्वीकार गर्दैनौं। मगर जातिको मात्र कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनसंख्या हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दाबीफेरि एकपटक यस लेखमार्फत् सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं । लोकतन्त्रमा संख्याले अधिकार प्राप्तिएवं उपभोगको निम्ति मार्ग सुनिश्चित गर्ने भएकाले जनगणनामा आफ्नो जातिको जनसंख्या केकतिरहेको छ भन्नेबारे चासो राख्नु सबैको पुनित कर्तव्य हो ।" भन्ने छपाइएकोमा त्यसको विरोध गर्दै केही मानिसहरुले सोही कान्तिपुरमा नै चर्को प्रतिक्रिया जनाएका थिए । अझै पनि मगर समुदायका अगुवाहरु सरकारी तथ्यांक अर्थात् मिथ्यांक नै घोक्ने र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि त्यही पढ्ने वा बोल्ने गरेकामा यो मन खिन्न भै जान्छ बेला बेलामा । खैर, यस कुरालाई यही थाती राखेर अब मूल विषयमा फर्कौं । कुरा के भने नेपालको मध्यकालीन इतिहासमा विराज थापा मगर र आधुनिक इतिहासमा भीमसेन थापाको नाम सबभन्दा माथि आउछ । यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
३) राना मगरहरुका बारेमा पनि माथि भनिएको किताब : 'पाल्पा, तनहुँ र स्यांग्जाका मगरहरुको संस्कृति'को पृष्ठ ३३ मा " आजभोलि राना कि राणा ? भन्ने विवाद पाईन्छ ।यस सन्दर्भमा, वंशावलीमा पनि रणक्षेत्रमा विजय प्राप्त गरेका मगरहरुलाई राणा भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपालका प्रसिद्ध मानवशास्त्री, प्राध्यापक श्री डोर बहादुर विष्टले पनि 'राना' उल्लेख नगरी 'राणा' भनी उल्लेख गर्नु भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राना नभईकन राणा मगर हुनुपर्ने हो किनभने कुँवरक्षेत्रीहरु राणा हुनुभन्दा पहिले नै वंशावलीमा (अर्थात द्रव्य शाहको पालामा नै) 'राणा मगर' भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ र कुँवरक्षेत्रीहरु पछि आएर मात्र राणा भएको इतिहास साक्षी छ ।" (यी कुराहरु 'गुरुङ वंशावलीमा' र 'केपछाकी आले मगर वंशावली' बाट लिइएको भन्ने कुरा किताबको पाद टिप्पणीमा जनाइएको छ।)
क) यसमा पनि बस्तुत: 'राणा र राना' भाषिक सिद्दान्तका आधारमा दुवै एकै हुन् । संस्कृत भाषाका 'राजा' र 'राजन' शव्दहरुसंग सम्बन्धित भएकोले वा संस्कृतिकरण गरिंदा 'राणा' बन्न गएको हो (हेर्नुस : D. C. Sirkar को Indian Epigraphical Glossary -१९६६ : पृष्ठ २७५ । Rana: derived from Ranaka; title of ruling chiefs; same as Rana, Ranaka. अथवा you may check pages 269 - 274 also) । त्यहि 'राणा' भाषिक स्थानीयकरण (Localization) हुँदै जाँदा 'राना' भएको हो । संस्कृतिकरणको चपेटोमा परेका मगरहरुलाई अलिक पहिलेसम्म 'हिन्दूकृत' भन्ने गरिन्थ्यो तर आजभोलि विद्वानहरुले 'संस्कृतिकृत मगरहरु' (Sanskritized Ethnic Magars) लेख्ने गरेका छन् ।(हेर्नुस : Angana P. Chatterji र Lubna Nazir Chaudhary को Contesting Nation, Gendered Violence in South Asia : Notes on the Postcolonial Present - २०१२ पृष्ठ ७७ )। सम्भबत: मगर भाषा बोल्ने त्यसबेलाका मगरहरुले 'राणा' शव्दलाई कुनै पठीत ब्राह्मणबन्धुले झैं सही उच्चारण गर्न सकेनन् र 'राना' नै भन्न थाले ।
ख) "वंशावलीमा (अर्थात द्रव्य शाहको पालामा नै) 'राणा मगर' भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ।" भनेर यदि लेखकले गोरखावंशावलीको कुरो गर्नु भएको हो भने वि. सं २००९ मा योगप्रचारिणी काशी गोरक्षटिल्लाद्वारा प्रकाशित गोर्खावंशावलीको पृष्ठ ६ मा "गणेश पांडे गोर्खा मा मगर हरु सित को सल्लाह बाधन लाग्या।" भनेर मगर जातिको उल्लेख त गरिएको छ तर कुनै थापा, राना वा राणा वा आलेको कुरो गरिएको छैन । त्यहि गोर्खावंशावलीको पृष्ठ ३३ मा राजा रामशाहका पालाका कुरामा भने, " तुरुक्षाकी आले ग्रंजा थापा ग्रंजा राना ई तिन थरले आलो पालो गरि खानु भनी कपर्दारी मान बक्सनु भयो ।" भन्ने लेखिएको छ । यसै अनुसार पृष्ठ ३४ मा "सिसौतिया राणा जी महाराज सित को बैठक " भन्ने लेखिएकोले 'राना र राणा' बारे गोर्खावंशावाली मा स्पष्ट भिन्नता देखाइएको छ । गोरखाली शाह राजाहरुको अझ अर्को 'गोरखाराजवंशावली'मा पनि "नारायणदासले अति शुभ सायेत् हेरी गणेश पांडे गंगाराम राना बुसाललाई सबै कुरा अर्ह्याई चिन्हपत्र दी लम्जुङ्ग पठाया " भन्ने लेखिएको छ । (हेर्नुस दिनेश राज पन्तको > गोरखाको इतिहास (चौथो भाग - २०५० पृष्ठ ९४३ )।
ग) यो 'राना वा राणा' लडाईमा जितेर वा वीरगति प्राप्त गरिएपछि पाईने पद्वी हो । एउटा कुनै 'थापा' परिवारबाट लडाईमा तीन पुस्ताले लडेर वीरगति प्राप्त गरेमा त्यो परिवारलाई 'राना वा राणा' पद दिइन्थ्यो भन्ने पनि लेखिएको पाइएको छ । उदाहरणका निम्ति कुनै रेशमी थापाको तीन पुस्ताले लडाइमा वीरगति प्राप्त गरेमा 'रेशमी राना वा राणा' होईने कुरा पनि लेखिएको पाइएको छ ।
घ) आजभोलि केही मुसलमानहरुले पनि यो 'राना वा राणा' लेख्छन वा लेख्ने गरेकाछन । यो चाहिँ उनीहरु पछि गएर धर्मपरिवर्तन गरेका कारण भएको हो ।
मे २७, २०१८
क्याम्ब्रिज म्यासाचुसेट्स , संयुक्त राज्य अमेरिका ।
Last Updated on Friday, 01 June 2018 16:02
चुरे भावर र भित्री मधेस छिचोल्दै झापाको शान्तिनगरदेखि सुरु गरेर डडेल्धुराको रुपाल जोड्ने १२ सय किलोमिटर दुरीको मदन भण्डारी राजमार्ग वनाउने भनि गएको आइतवार २०७५ साल जेठ ५ गते बसेको प्रम केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय ग–यो ।
राजा महेन्द्रको पालामा नेपालको पूर्वपश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग वन्यो । पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड या हिमाल जहाँसुकै बस्ने नेपालीको एकापसमा अन्तरघुलन गराउने उद्धेश्यले महेन्द्र राजमार्गको परिकल्पना गरिएको थियो जो आजपर्यन्त कारगर सिद्ध हुदैआएको छ । यो राजमार्गको विकसित रुप पूर्वपश्चिम जोड्ने रेलवेको खाँचो छ । तर उस्तै प्रकृतिको मदन भण्डारी राजमार्ग प्रस्ताव गरियो जो अनुत्पादक छ । तर सरकारको यो कदममा सत्ताधारीवर्ग चुपचाप छ । उ चुपचाप भएपछि यहाँका रैथानेहरु पनि मुकदर्शक छन । विडम्वना यहि हो ।
हालको महेन्द्र राजमार्गलाई हटाएर मदन भण्डारी राजमार्ग नाम राख्ने मनशाय नेपाल सरकारले राखेन । वरु उस्तै दुरीको समानान्तर राजमार्ग वनाई त्यसको नाम मदन भण्डारी राजमार्गको प्रस्ताव ग–यो । त्यसैगरी, सहरीकरणको विस्तारले नयाँ नयाँ चोक, वाटा घाटा, शिक्षण संस्थाहरु, कलेजहरु आदि इत्यादिहरु निर्माण हुदैगए र तिनीहरुको नाम उनैको नामवाट राख्दैगए । जस्तो वीपी राजमार्ग, वीपी मेमोरियल हस्पिटल, पुष्पलाल राजमार्ग, मनमोहन सिंह मेमोरियल हस्पिटल, प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्ग, वीपी चोक, पुष्पलाल चोक आदि उदाहरणहरु देशभर छन । तर, नेपालका जनजाति त्यसमा पनि मगरजातिलाई अमुक पार्टीले ढालेको शालिकको ठाउँमा लखन थापाको शालिक राख्न उक्साइयो । यस्तो कदमले नराम्ररी दुरगामी राष्ट्रिय चोट पु–याउछ भन्ने सत्ताधारीलाई हेक्का छ । अफसोच, प्रस्ताविक मदन भण्डारी राजमार्गको ठाउँमा लखन थापा राजमार्ग प्रस्तावत गर्न मगरजातिलाई उक्साउदैन जो अति पवित्र कदम मानिन्छ । वुझ्ने गाँठी कुरा यो हो ।
राजा महेन्द्रको नामवाट महेन्द्र राजमार्ग वन्यो । राजा महेन्द्र भनेपछि उनको पछाडि राजसंस्था जोडिन्छ । राजसंस्थाको पछाडि नेपालको इतिहास जोडिन्छ र नेपालको परिकल्पना भन्ने बुझिन्छ । त्यसैगरी, मदन भण्डारीको नामवाट मदन भण्डारी राजमार्ग प्रस्ताव गरियो । मदन भण्डारी भनेपछि नेपालको कम्युनिष्ट अन्तरगतको जनताको वहुदलीय जनवाद भन्ने वुझिन्छ । कम्युनिष्टको आवरणमा ठगिखाने मदन भण्डारीको विचारधारा हो यो । किनकी कम्युनिज्म भनेपछि त्यहाँ वहुदल बाच्दैन । अर्को कुरा अधिकाँश जनसमुदाय कविलामा छन र उनीहरु पूँजिवादी युगमा आइसकेका छैनन । उनीहरु गरिव छन जो कविलाको कारण गरिव छन । कविलाको वोक्रा उप्काउनमा मदन भण्डारीको विचारधाराले कुनै भुमिका खेल्दैन वरु समाजलाई गोलचक्करमा फसाउनमा भरमग्दुर सघाउछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सामाजिक रुपान्तरणमा मदन भण्डारीको विचारधाराले एउटा सिन्को पनि भाँच्न सक्तैन ।
यी उपरोक्त व्याख्याले यो पुष्टि गर्दछ कि राजा महेन्द्रको तुलनामा मदन भण्डारी चराको प्वाँख जत्तिको तौल आउदैन । तर पनि यी र यिनै वर पिपल झैं झाँगिएका छन । यस्तो किन हुन्छ भनि कारणहरु खोज्दै जाने होभने अमेरिकी समाजशास्त्री हकिन्स भन्छन, “जो सत्तामा हुन्छ ऊ वरपिपल झैं भाँगिदै जान्छ र उसका पसिना पनि अमृत तुल्य सदर हुन्छ । तर, जो सत्ता वाहिर हुन्छ त्यो विस्तारै ढालिएको रुखको पात ओइलाए झैं जनजातिमा झर्छ ।”
महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर मदन भण्डारी राजमार्ग प्रस्ताव किन गरियो ? भनि जिज्ञासा राख्दा सरकारको जवाफ यस्तो छ– “तराईमा मधेसी र थारुहरुको आन्दोलनले दिक्क पार्ने भए र त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्ने भयो । यसकारणले वैकल्पिक राजमार्गको प्रस्ताव गरियो ।” तराईका मधेसी र थारुहरु रुपान्तरणको खोजीमा छन र उनीको मानसपटलमा विद्रोही विचारको जन्म भयो । त्यसैगरी, पहाड या हिमालमा पनि यस्तै विचारको जन्म छ । जन्मिएको विद्रोही विचारलाई रुपान्तरण गर्ने एउटै उपाय हो राजनीतिक समाधान । तर, राजनीतिक समाधान नगर्ने वरु उनीहरुको विद्रोही विचारमाथि कुल्चिदै हिड्ने रणनीतिमा सत्ताधारी उन्मुख छ । अनुत्पादक कदम हुदाहुदै पनि विद्रोही विचारलाई दमन गर्न यसैको पूर्वाधारको रुपमा वैकल्पिक मदन भण्डारी राजमार्गको प्रस्ताव गरियो ।
२०७५ जेठ ८ गते तदनुसार २२ मे २०१८
Last Updated on Tuesday, 22 May 2018 14:16
२०७४ फागुन २ गते ,
१४१ औं लखन थापा स्मृति दिवस । देशको तात्कालिक निरङ्कुशताविरुद्ध जीवन आहुति दिएको दिन ।
लखन थापाको वलिदानीवारे राज्य वर्षौंवर्ष वेखवर रहिरह्यो । यद्यपि जनमानसमा भने लखन थापा प्रथम सहिदको छाप थियो । नेपाल मगर सँघले लखन थापावारे उत्खनन ग–यो । प्रथम सहिद घोषणाको लागि दशकौंदेखि राज्यलाई दवाव दिइरह्यो । लामो दवावपछि २०५६ सालमा सहिद र करिव १६ वर्षपछि वि.सं.२०७२ मा प्रथम सहिद राज्यले घोषणा ग–यो ।
सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित लखन थापालाई प्रथम सहिद घोषणा गर्न सवैको साझा प्रयत्नको प्रतिफल थियो । सवैको प्रयासस्वरुप यो सम्भव भएको हो । मगरजातिको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने पवित्र उद्धेश्यले नेपाल मगर सँघको जन्म भएको हो । सर्वाङ्गीण विकासभित्र मगरजातिभित्रको कुरीतिविरुद्ध लड्नु पनि एक हो । मगरजातिलाई सामाजिक रुपले सशक्त र समृद्धिको दिशा निर्देश गर्न नेपाल मगर सँघ मगरजातिको साझा संगठन थियो । यसले सिंगो मगरजातिलाई जनजातिवाट राष्ट्रियतातर्फ घचेट्न बल पु–याउने सक्षम संगठन मानिन्थ्यो ।
आजभोलिको कुरा हो । नेपाल मगर सँघ र मगरात एउटा सिक्काको दुइटा पाटा भन्ठान्छन, यस्तो वुझाई गराइयो । प्रारम्भमा नेपाल मगर सँघसँग मगरातको कुनै सम्वन्ध थिएन । मगरातको लागि नेपाल मगर सँघको जन्म भएको पनि होइन । मगरातले मगरजातिलाई सशक्त वनाउनमा कुनै भूमिका खेल्ने विषय पनि होइन । तर, मगर सँघको पुच्छरमा मगरात झुण्ड्याउन लगाइयो । कुनै अमुक राजनीतिक दलले कुनै अमुक व्यक्तित्वको शालिक ध्वंस गरेको र त्यो खाली ठाउँमा कसैको इशारामा प्रथम सहिद लखन थापाको शालिक राख्नू लगाइनुले विषयलाई थप गाम्भिर्यता वनाइदिएको छ । यो पनि एक जटिल समस्या थोपर्ने काम भयो । मगर सँघको पुच्छरमा मगरात चिप्काउने र अमुक व्यक्तित्वको भड्काइएको शालिकमा प्रथम सहिद लखन थापाको शालिक राख्न उत्प्रेरित गराउने शक्ति एउटै हो । यस्तो योजना वनाउनेमा मगर सँघको आफनै वुद्धि विवेकले होइन । यो वाह्यशक्तिको योजना हो । त्यो शक्ति र योजना सामान्य परिस्थितिवाट आएको पनि होइन । सिंगो मगरजातिलाई भरसक जनजातिवाट पछाडि घिचोटेर कविलामा झार्ने र त्यसो हुन नसकेमा जनजातिमै राखिरहने योजनासँग सम्वन्धित छ ।
संसारका कैयन जातिहरु कविला अवस्थामा झरेका दृष्टान्तहरु काफी छन । अमेरिकी आदिवासीहरु जसलाई नेटिभ अमेरिकन भनिन्छ, उनीहरु कविलामा झरेको छन । उनीहरु ह्वाइहाउसवारे वेखवर छन । त्यसैगरी अष्ट्रेलियाका आदिवासीहरु जसलाई अवोरिजिन भनिन्छ, तिनीहरु पनि कविलामा झरेका छन । उनीहरु पनि नेटिभ अमेरिकन झैं त्यहाँको संसद र सरकारवारे वेखवर छन ।
नेपालका मगरजातिको विरासतको हिसावले सवैभन्दा धनी छ, यद्यपि यो जनजातिमा छ । जनजातिलाई आफनै विरासतवारे वेखवर नै हुन्छ । यो सार्वभौम छ । जनजातिमा राखिरहने वाह्यशक्तिको जञ्जिरमा नफसौं । मनन गरौं ।
Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 11:37
Last Updated on Saturday, 24 March 2018 16:36
बाहुनवादी गठबन्धनलाई हारको स्वाद चखाउने भूमिगत रेशम चौधरी को हुन ?
आम निर्वाचन २०७४ को नतिजा आउने क्रम जारी छ । सबैतिर वामगठबन्धनको चर्चा परिचर्चा चुलिएको बेला कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा भने राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट रेशम चौधरी अत्याधिक बहुमतले विजय भएका छन् ।
टीकापुर घटनाको मुख्य आरोपीसमेत रहेका चौधरी ३४ हजार ३४१ मत ल्याई प्रतिनिधि सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । जबकि उनको निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी वामगठबन्धनकी उम्मेदवार गरिमा शाह १३ हजार ४०६ मै चित्त बुझाउनुप¥र्यो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार इश्वरी न्यौपानेले ११ हजार २०३ मतमै सीमित भइन् ।
टीकापुर घटना घटाएको आरोप लागेपछि उनी झण्डै २६ महिनादेखि प्रवासमा बस्दै आएका छन् । प्रवासबाटै वारिसनामार्फत् उम्मेदवारी दिएका उनी २० हजार ९३५ मतान्तरले विजयपश्चात राज्यले उनलाई र थारु समुदायलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने सबैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
को हुन् रेशम चौधरी ?
कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका ६ (साविक दुगौली गाविस ९) जगतपुरमा २०३४ साल असोज २१ गते जन्मेका उनी बाल्यकालदेखि नै खेलकुद, साहित्य, गायनदेखि वाककलामा रुची राख्थे । प्राराम्भिक शिक्षा राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पटाभार बर्दियाबाट र माध्यमिक शिक्षा टीकापुरस्थित विरेन्द्र विद्या मन्दिरबाट लिएका उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर गरेका छन् ।
०४७ सालमा माध्यमिक स्तरको थारु भाषाको जोग्नी साहित्य पत्रिका परिवारको प्रधान सम्पादक रहेका उनी ०५१ सालमा विरही नामक कविता संग्रह र मोर विहान नाम कतिसमेत प्रकाशन गरेका छन् । साहित्य र पत्रकारितामा दख्खल राख्ने उनको रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो सागरमाथामा लामो समय पत्रकारिता गरेको अनुभव छ । हाल टीकापुरलगायत ३ ठाउँमा उनको फूलबारी एफएम स्थापना भएको छ ।
गायन तथा सांगीतिक क्षेत्रमा पनि अब्बल मानिने उनी रेडियो नेपालबाट गीत गाउने पहिलो थारु गायक तथा क श्रेणीको गायक मानिन्छन् । उनले हालसम्म ९३ वटा सांगीतिक एल्बम निकालेको बताउँछन् । खेलकुदमा अति नै शौखिन उनी काराँतेमा थ्री डन गरेका छन् । भने खेलमै स्थायी जागिरे समेत भए ।
जुनकारण उनलाई राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, बहुमुखी प्रतिभा पुरस्कार, गोरखा दक्षिणबाहु, शुक्ल दिक्षित पुरस्कार, जयराज जैरु प्रकोप उद्धार पदक, गद्दी आरोहण पदकलगायत थुप्रै राष्ट्रिय पुरस्कार तथा पदकबाट सम्मानित भएका छन् ।
सधैं चर्चामा रेशम
बहुमुखी प्रतिभाका धनी रेशम चौधरी टीकापुर घटना र हालको निर्वाचनले मात्रै चर्चामा छैनन् । उनी बेला बखत चर्चामा रहने व्यक्तित्व मध्येका एक हुन् । उनको चर्चा हुनुको केहि कारण छ । सञ्चारको पहुँच नपुगेको तत्कालीन टीकापुरमा फूलबारी एफएम सञ्चालन गर्नु मात्रै नभर्ई, टीकापुरमा फूलवारी महोत्सव सञ्चालन गरी नेपालभरका कलाकारहरुको कुम्भ मेलाको आयोजना गर्ने नै उनै रेशम हुन् । हात्तीहरुको फुटबल खेल देखाउने, रेसलिङ खेल देखाएर पनि उनी निकै चर्चामै हुन्थे । त्यतिमात्रै नभई, कुनैबेला हेलिकप्टरमार्फत टीकापुरमा पुष्प वर्षात गराउने पनि उनै हुन ।
टीकापुरको लागि नौलो गतिविधि गरेर उनी टीकापुर र आफ्नो सामाजिक छबि बढाए । यिनै छबिकै कारण उनको आवश्कता महसुस गरी टीकापुरको स्थानीयहरुले हालको निर्वाचनमा अत्याधिक भोट दिई विजय गराए ।
टीकापुर घटनापछि कफ्र्युको समयमा थारुहरुको घरमा आगजनी भयो भने आगजनीमा संलग्न कोही पक्राउ परेन । तर उनलाई राज्य पक्षले एकोहोरो रुपमा घटनाको मूख्य योजनाकारको आरोप लगायो । यस्ता विभिन्न कारणले थारु समुदायले आफूहरु हेपिएको, दमन गरिएको, अन्यायमा परेको महसुस गरेको बताइन्छ । यस्ता भावनाको कारण पनि थारु गैरथारु मतदाताहरुले एकलौटी रुपमा रेशमलाई भोट दिएको बताउँछन् थारु नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरी ।
उनले भन्छन्– ‘सबै राजनीतिक दलले थारु समुदायको माग मुद्धालाई वेवास्ता गर्दै गएका छन् । तर माग मुद्दा उठाएकै कारण कोही जेलमा पर्नु, प्रवासी बन्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । जुनकारण थारु मतदाताले आफ्नो आस्थाको आधारमा नभई नैतिकता र टीकापुर घटनाको पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर पनि भोट दिए, यसलाई राज्य लगायत सम्बन्धित पक्षले गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने जरुरी छ ।’
नेपालको नयाँ संविधान बन्ने क्रममा अखण्ड सुदूर पश्चिम र थरुहट/थारुवान आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । हालको संविधान अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरको मात्रै माग सम्बोधन गरेको छ भने थरुहट पक्षधरको माग मुद्दा सम्बोधन भएन । जुनकारण थारु समुदाय सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा हारेको महसुल गर्दै आएका थिए । उक्त पीडा थारु मतदाताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेको थारु अगुवाहरुको बुझाई छ ।
चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा पनि रेशम चौधरीको प्रचारशैली निकै पृथक थियो । उनले सामाजिक सञ्जालसहित आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्ना प्रचारकहरुलाई चुनावी घरदैलोमा खटाए । एकदमै मार्मिक र यथार्थपरक विषयवस्तुको कारण पनि उनी मतदाताको मन जितेको बताइन्छ । उनी निर्वासित भए पनि प्रोजेक्टरमार्फत गाउँ–गाउँमा आफ्नो पीडा सुनाएर जनताहरुको सहानुभूत लिन सफल भए । जुन चुनावी प्रचारकै क्रममा उनको प्रचारकहरुमाथि प्रहरी हस्तक्षेप पनि भयो ।
के भन्छन् रेशम चौधरी ?
एक अर्कोसँग परस्परविरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट÷थारुवान आन्दोलन भयो । त्यस्तैबीच २०७२ साल भदौ ७ गते आठ प्रहरीसहित एक बच्चाको ज्यान गयो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ गते कफुर्य लागेको समयमा टीकापुरस्थित सयौं थारुहरुको घरमा आजजनी भयो ।तर त्यस घटनाको सत्यसत्य छानबिन नगरी राज्यले आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै भरमा झुठो मुद्दा लगाएको रेशम चौधरीको भनाई छ । अस्पतालमा उपचार गराइरहेका, खेतमा काम गरिरहेका, जिल्लाभन्दा वबाहिर रहेका निर्दोष थारु तथा आन्दोलनका नेता एंव कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न मुद्दा लगाइ जेलमा कोचेको उनको भनाई छ । हाल कैलाली कारागारमा पुर्पक्षको लागि २५ जनालाई थुनामा राखिएको छ ।
हालको आमनिर्वाचनबाट जनताहरुले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्नुका साथै थारु समुदायको माग र मुद्दा सम्बोधन उचित रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनि अत्याधिक मतले आफूलाई विजय गराएको उनी बताउँछन् ।
दसैं मान्नुस् नमान्नुस् तर आफ्नै समुदाय विरुद्द सुसाइड गोल नगरौ ।
आफ्नै हिरोको खोजीमा छन् तामाङहरु
खपाङ्गी नेपालका नेल्सन मन्डेला
नेपाली संगीतिक क्षेत्रका अमर नक्षत्र स्व. अरुण थापा मगरः अलविदा